Thursday October 10, 2019 - 10:03:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa loogu yeero Q.Midoobay ayaa wajahaysa dhaqaala darro aad u baahsan waxaana lafilayaa in ay joogsadaan dhammaan shaqada hay'adaha kala duwan ee Ururka bisha soo socota.
António Guterres oo ah Xoghayaha guud ee Q.Midoobay ayaa shaaciyay in aan la heyn qarashaadkii ay ku shaqeyn lahaayeen dhammaan hay'adaha Ururka iyo lacagaha ay mushaaraadka uqaataan dhammaan shaqaalaha.
Wuxuu sheegay in bisha Novembar ee soo socota aan wax qarash ah loo hayn mashaariicda ururka iyo lacagihii mushaaraadka ahaa ee ay qaadan jireen tobanaan kun oo shaqaale ah kuwaas oo ku sugan daafaha kala duwan ee caalamka.
Dowladda Mareykanka oo bixisa miisaaniyadda ugu ballaaran ee qarshka ay ku shaqeyso Q.Midoobay ayaan wali bixin qarashkii sanadlaha ahaa ee ay ugu talagashay golahan, 22% ayaa la sheegaa in Washington ay dhabarka uridatay qarashka UN-ka taas oo keentay in golahan uu ku shaqeeyo rabitaanka Mareykanka.
Miizaaniyadda sanadkan ee Q.Midoobay ayaa lagu sheegay 674 Malyan oo dollar, Donald Trump ayaa horay ugu hanjabay in uu yarayn doono qarashaadka ay dowladdiisu siiyo Ururada UN-ka.
Waa dhaqaala darradii ugu xumeed ee soo marta Q.Midoobay muddo 10 sanadood gudahood ah, khubaro ku sugan magaalada New York ayaa sheegaya in haddii aan bisha soo socota la bixin lacagaha mushaaraadka ee shaqaalaha ay joogsan doonaan dhammaan howllihii UN-ka ee daafaha caalamka.